Warshadda mitirka Shiinaha ee chlorophyll iyo soosaarayaasha | Chuanyunjie
Warshad deg deg ah oo aan baabi'in in-vivo ogaanshaha, oo aan saameyn ku yeelan koritaanka dhirta.
Dhammaan xuduudaha ayaa si isku mid ah loo qiyaasi karaa loona soo bandhigi karaa waqtiga dhabta ah hal hawlgal.
Maaddada nitrogen, waxyaabaha ku jira chlorophyll, heerkulka caleen iyo huurka caleen ayaa lagu soo bandhigaa isla shaashadda isla markaana xogta taariikhiga ah ayaa lagu kaydin karaa si isku mid ah si loogu kala horreeyo.
Xogta la cabiray waxaa loo dhoofin karaa iyadoo la isku xirayo kumbuyuutar si loo fududeeyo maaraynta iyo falanqaynta nafaqooyinka dhirta.
Xogta taariikheed waxaa loo daawan karaa siday u kala horreeyaan iyo sidoo kale ka boodid sidoo kale.
Xogta ku keydsan martida looma lumin doono haddii ay dhacdo shil awood koronto.
Xogta taariikhiga ah waa la tirtiri karaa hal guji.
Xogta la cabiray waa la dhoofin karaa iyadoo lagu xirayo kumbuyuutar si loo fududeeyo maareynta iyo falanqaynta nafaqooyinka dhirta.
Waxaa ku shaqeeya batari lithium ah, oo leh nal gadaal.
1. Qiyaasta cabirka: chlorophyll: 0.0-99.9SPAD
Maaddada nitrogen: 0.0-99.9mg / g
Qoyaanka caleenta: 0.0-99.9RH%
Heerkulka caleenta: -10-99.9 ℃
2. Xaqiijinta cabbirka: chlorophyll: gudaha ± 1.0 cutubka SPAD (qiimaha SPAD 0-50 heerkulka qolka)
Maaddada nitrogen: ± 5%
Qoyaanka caleenta: ± 5%
Heerkulka caleenta: ± 0.5 ℃
3. Soo noqnoqoshada: chlorophyll: gudaha ± 0.3 SPAD unit (qiimaha SPAD: 0-50)
Maaddada nitrogen: unit 0.5 unug
Qoyaanka caleenta: unit 0.5 unug
Heerkulka caleenta: ± 0.2 ℃
4. Baaxadda aagga: 2 mm * 2mm
5. Muddada cabbirka: <3 s
6. Awoodda keydinta xogta: 2000 nooc oo xog ah
7. Quwad koronto: 4.2V batari lithium dib u soo celin kara
8. Awood batteri: 2000mah
9. Miisaanka: 200g
Model Waxyaabaha tijaabada ah
FK-YL01 Ku beero maadada chlorophyll
FK-YL02 Waxyaabaha Chlorophyll iyo heerkulka caleen ee dhirta
FK-YL03 Waxyaabaha Chlorophyll, heerkulka caleen iyo caleenta nitrogen ee dhirta
FK-YL04 Waxyaabaha Chlorophyll, heerkulka caleen, qoyaan caleen iyo caleenta nitrogen ee dhirta
Hore: FK-CT20 Baaraha nafaqada ciida
Xiga: Ciidda afar baare baare
Mitir gacmeedka mitirka ah ee chlorophyll
Mitirka dijitaalka dhirta dhijitaalka ah
Mitirka chlorophyll ee gacanta